တော်ဝင် Fury: ဘယ်လို Cherie Blair ၏အာရုံနောက် & # 039 ပါသလား; ဘုရင်မကြီးနှင့်ဘုရင်မမိခင် mortified & # 039 left; Tele RELAY တစ်ခု - Balmoral မှာ
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "တော်ဝင် Fury: ဘယ်လို Cherie Blair ၏ 039 အာရုံနောက် & # ပါသလား; ဘုရင်မကြီးနှင့်ဘုရင်မမိခင် mortified & # 039 left; Balmoral မှာ
la ကျောက်ကပ် et မင်းသားဖိလိပ္ပု ယခုအချိန်တွင်စကော့တလန်အတွက်ချစ်ရာသခင်သည် Balmoral အိမ်ခြံမြေမှာသူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ချိုးမှာ installed နေကြသည်။ အဆိုပါတော်ဝင်မိသားစု အစဉ်အလာနွေရာသီကာလအတွင်းဧကရာဇ်မှပူးတွဲပါ - ပေမဲ့ စာရာသည်ဖာဂူဆန် ပေါ်လာ တနင်္ဂနွေတစ်ဦးအလျင်စလိုထွက်ပေါက်အောင် နောက်တွင် မင်းသားအင်ဒရူး ဤနေရာတွင်။ မင်းသားချားလ်စ် et Camilla လက်ရှိတွင်ဝေလမင်းသားနှင့် Cornwall ၏ Duchess ဘုရင်မကြီးမိခင်အဘိဓါန် Highland အသက်တာ၏မေတ္တာရှည်ရှိရာဘုရင်မကြီးမိခင်, Balmoral အိမ်ခြံမြေအတွက် Birkhall ၏အဟောင်းစကော့တလန်နေအိမ်သို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အချိန်ကိုဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ Balmoral မှသွားသောအခါသို့သော် Cherie Blair ၏ဝေးလံခေါင်ဖျားစကော့တလန် Highlands သို့အဘို့သူ့မေတ္တာကိုမျှဝေမပေးခဲ့ပါဘူး တိုနီဘလဲ အစဉ်အလာနှစ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်။
စာရေးသူရှင်ပေါလုဖြစ်သူ Scott, 2006 သူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိတှငျ "တိုနီ & Cherie" ဟုတော်ဝင်မိသားစုနှင့်မစ္စဘလဲမကြားဘူးဘယ်လိုဖော်ပြသည်။
သူကရေးသားခဲ့သည်: "အစအဦး မှစ. Cherie တော်ဝင်မိသားစုကိုမကြိုက်ကြဘူး .
"Balmoral မှာတနင်္ဂနွေနေ့လယ်စာမှာမကြာမီ၏သေသောနောက်, မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ ဘုရင်မကြီးမိခင်များနေ့အခါသမယများအတွက်န်ကြီးချုပ်၏ဇနီးကရွေးချယ်ဘောင်းဘီ၏ရွေးချယ်မှုအားဖြင့် "mortified" ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: တော်ဝင် Fief: အက်ဒွပ် "စိတ်ပျက်" ဘယ်လိုမိဖုရားမယ်တော် Anne နဲ့အံ့အားသင့်
Cherie Blair ၏ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II နဲ့ဘုရင်မကြီးမိခင်များနေ့ (ရုပ်ပုံ: Getty)
Chery နှင့်တိုနီဘလဲ 1998 အတွက် Balmoral မှာမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး (ရုပ်ပုံ: Getty)
"သူမဟာလည်းဧကရာဇ်ဖို့ဒူးပစ်ခြင်းငှါ Mrs Blair ၏ငြင်းဆန်ခြင်းဖြင့်ကမောက်ကမခဲ့ပါတယ်။ "
Scott wrote: "ဘုရင်မကြီးသူမတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုသို့ဖြန့်ချိတဲ့အခါ Mrs Blair ၏တရားသေံအဖြစ်ကိုမြင်လျှင်အဘယ်အရာများကအာရုံခဲ့သည်။ "
သူကဆက်ပြောသည်: "စကော့တလန်တွင်ဤစိတ်ဆင်းရဲကျန်ရှိနေစဉ်အတွင်း Cherie တစ်ဦးတည်းနေတဲ့အားကစားတိုင်းပြည်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဘယ်တော့မှထားပါတယ် - မိမိသွေးထွက်သံယိုကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်အတူပိတ်ပင်မှု၏ဖြစ်ရပ်တောင်းပန်။ "
စာရာသည်ဖာဂူဆန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဘုရင်မကြီးမိခင်များနေ့၏အသက်တာ၏အရေးကြီးသောမှတ်ချက်များထင်ရှားခဲ့ပြီး [ROYAL ကျွမ်းကျင်သူ]
ထင်ရှား: တော်ဝင်မိသားစုအကြိုက်ဆုံးအံ့အားသင့် [Commentator]
ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း Cherie Blair ၏ 1997 (ရုပ်ပုံ: Getty)
မစ္စ Blair ၏အတိုက်အခံ လူအသက်ကိုသတ်တတ်သောအားကစားတော်ဝင်မိသားစုနှင့်အတူခြားနားချက်၏တစ်ခုတည်းသောအမှတ်မဟုတ်ခဲ့ တစ်ခုခုကို။
မစ္စတာဖြစ်သူ Scott ဆက်လက်: "အစဉ်အမြဲဖော်ရွေများနှင့်ကြိုဆိုပွဲဘုရင်မကြီး, သူတို့ရဲ့မျက်မှန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ regularity နှငျ့ပွညျ့စုံမထားဘူးဆိုရင်, မိမိဧည့်သည်များအကောင်းတစ်ဦးအချိန်မရှိဘူးထင်ပုံရသည်။
ခဲလျင်မြန်စွာအရက်၏ပမာဏအပေါ် commented, သောက်သူကို Cherie ။ "
ဘုရင်မကြီး Balmoral ရန်သူ၏ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်မှရက်စွဲပါမစ္စဘလဲမှ: တိုနီဘလဲကသူ၏စာအုပ် 2007 အတွက်ရေးသားခဲ့သည် Alistair ကမ့်ဘဲလ်ယခင်ရောဂါဗေဒပညာရှင် "Extractive ဂျာနယ် Alastair ကမ့်ဘဲလ်တိုနီဘလဲနှစ်" ဒီရန်ဖြစ်ပါသည် Added ။
Balmoral ရဲတိုက် (ရုပ်ပုံ: Getty)
Balmoral အတွက်အိမ်မှာဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II နဲ့မင်းသားဖိလိပ္ပု (ရုပ်ပုံ: Getty)
မစ္စတာကမ့်ဘဲလ် wrote: "ဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယား၏ဇာတ်လမ်း (Balmoral Ghillie) နဲ့ဇာတ်ခင်းရှိခြင်းလျှင်ရှယျရီမိဖုရားဟုမေးယောဟန်ကိုဘရောင်းကစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရှယျရီ, ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ချမ်းအခန်းပေါင်း Balmoral ကြိုက်တယ်သို့မဟုတ်9နံနက် bagpipe ဖို့နှိုးခဲ့ပါဘူး။
Scott wrote: "Cherie ခဲ့သည်သူ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့နိုးထရန်တုံ့ပွနျမှု, နောက်ပိုင်းမှာငါ့အမစ္စစ်ဘလဲသူ့ကိုယ်သူအားမိမိတော်ဝင်ခရီးစဉ်၏ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အဆိုအရ "Inalienable" ။ "
အဆိုပါတော်ဝင်အိမ်ရာများ (ရုပ်ပုံ: DX)
မစ္စတာဖြစ်သူ Scott လည်းရှိကွောငျးကိုအကြံပြု "Royal နှင့်၎င်းတို့၏ courtiers ထံမှ Blair ၏အနိုင်နိုင်ဖုံးကွယ်သံသယ။ "
မသာ "သူတို့မဆိုအလုပ်သမားအစိုးရသတိထားဖြစ် predisposed ဇာတိအားဖြင့်ရကြ၏: ​​သူကဆက်ပြောသည်။
"ဟုအဆိုပါတော်ဝင်မိသားစု၏အင်္ဂါတို့တွင်နက်ရှိုင်းရန်လိုမုန်းတီးမှုလည်းရှိခဲ့သည် အဆင့် ဘယ်လိုရှင်းပြ, ၎င်းတို့၏အမြင်၌, မိဖုရားရက်အနည်းငယ်ဒိုင်ယာနာတိုနီဘလဲနှင့်သူ့ "henchmen" ၏သေသောနောက်လမ်းပေးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ "
မင်းသမီးအန်း 1997 အတွက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံစဉ်မစ္စတိုနီဘလဲနှင့်အတူသဘောတူရန်စတင်မထားပါဘူး။
ဘုရင်မကြီးနဲ့ဒိုင်ယာနာနှင့် Chalres, စကော့တလန်ဖြင့်လိုက်ပါသွားဘုရင်မကြီးမိခင်, (ရုပ်ပုံ: Getty)